Ticky: Ukusekelwa kwamakhasimende okulula, okungabizi kwe-SaaS | Martech Zone
Engxoxweni yethu noI-Formstack ngoLwesihlanu, besikhuluma nje ukuthi izinhlelo zokusebenza ezinhle ziqhubeka kanjani ukungena emakethe ezinikeza izixazululo ezingabizi ezingakhula nebhizinisi lakho. Njengoba ngangibhalela unjiniyela ngodaba esasinalo ne-plugin yakhe, ngangena ohlelweni lwethikithi ababelusebenzise, Ticky.
Uma uyibhizinisi elikhulayo, lokhu kungaba uhlelo oluhle kuwe ngoba bakhokhisa u- $ 5 nje ngomsebenzisi. Njengamanje, uhlelo luhlanganiswe ne-Envato, umndeni we-web plugin, izingqikithi kanye namasayithi we-snippet, ukuze onjiniyela bakwazi ukunikela ukwesekwa kumakhasimende abo. Inazo zonke izici ezidingekayo esitolo esincane sokwakha - esine-bug fixer tracker, i-FAQ kanye nesisekelo solwazi, izaziso ze-imeyili nezimpendulo, nokubekwa phambili kwamathikithi.
I-Ticky ithuthukisa izinzuzo ezilandelayo:
Umkhiqizo - Ticky kukuvumela ukhethe isizinda futhi wenze ngokwezifiso i-logo yakho ukufanisa umkhiqizo wakho ukuze uthole isipiliyoni samakhasimende esingenamthungo.
I-Envato-friendly - I-Ticksy yenzelwe ukuhlanganisa kalula ne-Envato, ikwenze kube lula ukuxhasa nokuqinisekisa ukuthenga kusuka ku-Day One.
Okonga isikhathi - Umklamo ohlanzekile we-Ticksy ne-interface kwenza inqubo yokusekela ibe lula futhi inembile kuwe futhi - okubaluleke kakhulu - amakhasimende akho.
Akunabloat - Gxila ekusekeleni amakhasimende akho, hhayi ukuphatha uhlelo lokusebenza. I-Ticky inikeza amathuluzi wokusekela owadingayo empeleni. Ayikho i-bloatware.
Engazinzi - Ngama- $ 5 nje kuphela ngomsebenzisi ngenyanga - futhi akukho zindleko ezifihliwe - I-Ticksy ikuvumela ukuthi unikeze ukwesekwa kwamakhasimende okubabazekayo ngezindleko zelitha elilodwa le-iced vanilla ngesibhamu esingeziwe.
echachambile - Ideshibhodi elula, enembile yeTicky ikunikeza amathuluzi okuhlala uhlelekile, usebenze kahle futhi unikeze ngamakhasimende aphezulu endizeni.
Tags: database yokuphendulaInsizakalo yekhasimendeukwesekwa kwamakhasimendeImibuzo Evame Ukubuzwaimininingwane yolwaziithikithi lokusekelaUkunikezwa ithikithi
Ingabe i-Adobe SiteCatalyst Losing Steam?